Bruno Fernandes Oo Garab Istaagay Laacibka Ku Dhibaatoonaya Old Trafford Ee Jesse Lingard
Tuesday July 28, 2020 - 23:17:31 in Maqaallo by Super Admin
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa difaacay laacibka ku dhibaataysan Old Trafford
ee Jesse Lingard oo Axaddii horyaalka kusoo xidhay goolkii ugu dambeeyey ee ay kooxdiisu ka dhalisay horyaalka Premier League ee xili ciyaareedka.
Lingard ayaa beddel kusoo galay qaybtii dambe ee kulankii Leicester City, waxaanu waqtigii dheeraadka ahaa ee ciyaarta lagu daray uu dhaliyey goolka labaad ee kooxdiisa, waxaanu goolkaasi noqday kii ugu horreeyey ee Premier League ah ee uu Red Devils u dhaliyo tan iyo December 2018.
Laacibkan reer England ayaa canaan weyn waajahayey muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaanu noqday ciyaartoy ay sharad ku dhigtaan taageereyaashu iyagoo ku doodayay in aanu wax goolal ah dhalin doonin.
Laakiin Bruno Fernandes oo la hadlayay telefishanka MUTV ayaa waxa uu si cad u garab istaagay Lingard, waxaanu yidhi: "Dabcan, Leicester waxay isku dayaysay inay nasoo weerarto sababtoo ah waxay u baahnaayeen inay laba gool naga dhaliyaan, annaguna si fiican ayaanu isku difaacaynay laakiin marna maanaan joojin dagaalka, waxaana shaqo cajiib ah qabtay Jesse.
"Aniga fikirkayga, Jesse wuu u qalmayay goolka, sababtoo shaqada uu qabtay. Dhamaan aragtiyihii uu qof walba ka bixiyey iyo ciyaartoyduba waxay ahaayeen in aanu waqti badan ciyaarin. Waxay ila tahay in sababta uu goolka u dhaliyey Jesse ay ahayd inaanu tababar adag qaadanay, isaguna dedaalay si uu kooxda u caawiyo.”
Si kastaba, Jesse Lingard waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda Manchester United ay u diyaarinayso inay iibiso xagaagan.